विजय चालिसेका बालकथाहरु | Ketaketi Online
Home » विजय चालिसेका बालकथाहरु
विजय चालिसेका बालकथाहरु
posted by ketaketionline on Fri, 09/11/2020 - 12:44
२०७७ भदौ महिनाका लागि पुरस्कृत कृति समीक्षा
– अरुण नदी खत्री
विजय चालिसेका बालकथाहरु नामक बालकथा सङ्ग्रह साहित्यकार विजय चालिसेको २०६५ पुसमा प्रकाशित कृति हो । उहाँको होटल राकीमा हत्या नामक जासुसी उपन्यास २०३१ सालमा पहिलो कृतिको रुपमा प्रकाशित भएको थियो । यस बालकथा सङ्ग्रहभित्र कासाङ, भो मलाई साइकल चाहिँदैन !, अनिताको अठोट, मुस्ताङको मीतज्यू, आकाशको अँध्यारो गुफाभित्र, मङ्गलवासीको हमला, पराइ ग्रहका साथी लगायत विभिन्न शीर्षकका ३५ वटा बालकथाहरु रहेका छन् । यी कथाहरु विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित छन् ।
सङ्ग्रहभित्रको पहिलो बालकथा कासाङमा कासाङकी आमा मुस्ताङ जिल्लामा मुक्तिनाथ आउने पाहुनाहरु बस्ने खाने सानोसानो लज चलाउनु हुन्थ्यो । यो झारकोट गाउँ असाध्यै रमाइलो थियो । बाटामा आउने जाने मान्छे एकछिन उभिएर हेर्थे र जान्थे भनिएको छ । यसमा सानी बालिकाको साहसको कथा छ । पढ्दा मजा लाग्छ । भो मलाई साइकल चाहिँदैन कथामा छोरा जयले आमासँग मलाई नयाँ साइकल नभई हुँदैन साइकल नल्याइदे म त स्कुलै जान्न भनेर जिद्दी गर्छ र कहाँ पाउने साइकल किन्ने पैसा बहिनीलाई स्कुल हाल्ने बेला भैसक्यो त्यसको लागि पैसा खोज्नुछ आमाले दिक्क मान्दै भन्नुहुन्छ । त्यसपछि के हुन्छ ? यो कुरा थाहा पाउन यो कथा पढ्न रमाइलो छ ।
अनिताको अठोट कथामा चित्र बनाउन अत्यन्त सौखिन अनिताको दुबै हात लुला भएकाले अनिताले आफ्नो चित्र बनाउने रहरलाई खुट्टाको माध्यमबाट कसरी पुरा गरिन् र विद्यालयको चित्रकला प्रतियोगितामा उनी कसरी प्रथम हुन सफल भइन् भन्ने बारेमा रमाइलो वर्णन गर्दै गरे नहुने केही छैन भन्ने बारेमा बालबालिकालाई सन्देश दिइएको छ । मुस्ताङका मीतज्यू कथामा अभिनवले मुक्तिनाथको थकाइ मेटिएपछि आफ्नो बाबासँग मायालाग्दो गरी पुरानो मुस्ताङ हेर्न जाम् है भन्छ । बाबाले मेरो फुर्सद छैन भरपर्दो मान्छे फेला परेमा पठाइदिउला भन्नुहुन्छ । यस कथामा सोमु र अभिनव नामका बालपात्रहरुले मुस्ताङको चर्चित सहर लोमान्थाङ घुम्न जाँदा देखेका रोचक दृष्यहरुको सुन्दर वर्णन प्रस्तुत गरिएका छन् । यो कथाले मुस्ताङे संस्कृति र इतिहास झल्काएको छ । कथा गजबको रमाइलो छ ।
होचा मानिससँगको भेट शीर्षकको कथामा अफ्रिकाको पिग्मा भन्ने मानिसजस्तै लाग्ने होचा मानिससँग मुक्तिनाथमा सोमु र मिङ्माको भेट भएको प्रसङ्गलाई देखाउँदै उक्त जातिका बारेमा जानकारी दिन खोजिएको छ । साथै यस कथामा वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिइएको छ ।
पराइग्रहका साथी कथामा इशान डराउँदै काँपिरहेको देखेर नडराऊ डराउनु पर्दैन हामी पनि तिमीजस्तै मान्छे हौं त्यो अनौठो जीवले भनेको छ । उसको आवाज मान्छेको नभएर मेसिनबाट आएको जस्तो सुनिएको थियो । निकै टाढा भँवरा भुनभुनाएजस्तै कस्तोकस्तो अनौठो थियो त्यो आवाज भनिएको छ । त्यो अनौठो जीवको भनाइले इशानको डरमा कमी पनि भयो । त्यसपछि के भयो ? यो कथा पढ्न सिफारिस गर्दछु ।
होचा मानिससँगको भेट कथामा गुफाबाट एकजना सानो मानिस बाहिर निस्कन्छ । त्यो मानिस केटाकेटीजस्तै सानो देखिए पनि अनुहार र जिउ भने ठूलो मानिसको जस्तै छिप्पिएको देखिन्थ्यो भनिएको छ । यो कथाको अनौठो वर्णन पढ्दा रोचक लाग्छ ।
आकाशको अँध्यारो गुफाभित्र कथामा मानिस मङ्गल ग्रहको यात्रामा जाँदा त्यहाँ आएका समस्याहरुको चित्रण गरिएको छ । लेखकले ग्रह, तारा र आकाशका बारेमा रमाइलोसँग जानकारी दिनुभएको छ ।
सबैभन्दा महङ्गो ढुङ्गा कथामा बेचे मात्र पैसा आउने हिरामोतीभन्दा अन्न पिन्न उपयोगी हुने जातोलाई बहुमूल्य वा महँगो भएको बताइएको छ ।
बत्तीको कथा शीर्षक कथामा आगोको आविष्कार भइसके पनि सुरुसुरुमा मानिसले बत्ती बालेर अँध्यारो हटाउन जानेका थिएनन् । उनीहरुले शिकार गरेर ल्याएका जनावरका हाडखोर कहिलेकाही आगोमा पर्दा धेरै बेरसम्म बलेको देखे । त्यो देखेर उनीहरुले यस्तै कुरा आगोमा हाल्दा धेरैबेरसम्म उज्यालो आउँदोरहेछ भन्ने थाहा पाएको कुरालाई मजाले चित्रण गरिएको छ ।
राक्षसको हार कथामा राक्षसहरु झिँगा, लामखुट्टे, जुकाजस्ता रुप लिएर फोहरमैलामै बस्ने गर्थे भनिएको छ । बलबहादुर स्कुल गयो कथामा गरिबीले गर्दा पढ्न नपाएको बलबहादुर आफ्नो प्रयासले कसरी स्कुल जान सक्ने भयो भन्ने देखाइएको छ । सबिनाकी बज्यै कथामा आफ्ना घरको फोहोर बाटामा फालेर सबै टोलवासीलाई दुःख दिने मान्छेले कसरी बदनाम हुनुपर्छ भन्ने बारेमा शिक्षा दिइएको छ । टेलिभिजनमा छिमेकी चन्द्रमाका मान्छे कथामा इशानले आफ्नो बाबासँग हिजो तपार्इंले हेर्नुभएको सिनेमा हेर्दाहेर्दै टेलिभिजनमा अचानक अर्कै दृष्य आएर अनौठो जीव देखिएको थियो । टेलिभिजनमा देखिएको त्यो अनौठो जीव आफूलाई युरोपको मान्छे भन्थ्यो भनिएको छ । टेलिभिजनमा देखिएको अनौठो दृष्यले इशान छक्कै पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
स्याबासी शीर्षकको कथामा अञ्जु, अरुण र आलोक सधैँ बेलुकीपख मिलेर खेल्ने गर्थे । खेल्ने चौर घरभन्दा केही पर पथ्र्यो । एकदिन चौरमा खेल खेल्न जाँदा आज अर्कै नयाँ खेल खेलौ आलोकले अञ्जु र अरुणलाई भन्छ । कस्तो नयाँ खेल ? भनी सोध्दा आलोकले आज विद्यालयमा आवाजको बारेमा पढेको होइन ? विज्ञान पढाउने गुरुले धागोबाट टेलिफोन बनाएर देखाउनु भएको थियो नि हामी पनि त्यही खेल खेलौ न आज हुन्न भनेको कुरालाई कथाकारले रमाइलोसँग प्रस्तुत गर्दै बालबालिकालाई वैज्ञानिक चेतना प्रदान गर्नुभएको छ ।
पृथ्वीमा सङ्कट कथामा एउटा शिशु ग्रह पृथ्वीको नजिकै आइपुग्न लागेको र ठोक्किने डर भएको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै बिना क्षति त्यसलाई निष्क्रिय गराउने उपायका बारेमा कौतुहलपूर्ण कथा प्रस्तुत गरिएको छ । पश्चाताप शीर्षकको कथामा विमलले आफूले जथाभावी ढङ्गले खानेपानी फोहोर गर्दा र त्यही खानेपानी खाँदा आफ्नी दिदी बिरामी भएकोमा दिदीको बारेमा बताउँदै सफा पानी पिउन प्रेरित गरिएको छ ।
लोभको फल कथामा कुखुराको भालेको मासु खाने लोभले गर्दा फ्याउरो कुकुरबाट मारिएको घटनालाई देखाइएको छ । छक्याउने बानी कथामा विकास भन्ने पात्रको छक्याउने बानीले उनको हजुरआमाले दुःख पाउनु भएको कुरालाई उल्लेख गरिएको छ । मिठाईको लोभ कथामा चौथो कक्षामा पढ्दै गरेको विवेकको अरु सबै बानी राम्रो भए पनि मिठाई भनेपछि असाध्यै लोभी थियो । मिठाई देख्नासाथ आमासँग सोध्दै नसोधी खाइदिन्थ्यो । एकदिन उसको घरमा ऊ एक्लै हुँदा चिन्दै नचिनेको मान्छे आएर उसलाई दिएको लड्डु खाएपछि उसको होसै हरायो र उसलाई निद्रा लागेजस्तै भयो । त्यसपछि के भयो भन्ने कुरा थाहा पाउन यो कथा पढ्न रमाइलो रहेको छ । सङ्ग्रहको अन्तिम कथा साथीको मायामा राम्ररी पौडिन नजान्ने साथीको कथानकबाट मित्रताको महत्वबारे सन्देश दिइएको छ ।
यस सङ्ग्रहभित्रका बालकथाहरु राम्रा, ज्ञानबर्धक र समाज सुधारको भावनाले लेखिएका छन् । बालबालिकाको रुचि, स्वभाव र मनोविज्ञानलाई ख्याल गरेर तयार गरिएका छन् । वैज्ञानिक, सामाजिक, पौराणिक र पारिवारिक विषयवस्तुलाई यी कथाहरुमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालको विविधतामय भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशको झल्को पनि संग्रहका कथाहरुमा पाइन्छ ।
यी बालकथाहरु प्यारा भाइबैनीहरुलाई ज्ञानबद्र्धक छन् । स्कुलमा पढ्ने ९ वर्षभन्दा माथिको उमेरका विद्यार्थीहरुका लागि विजय चालिसेले लेख्नुभएको यो बालकथासङ्ग्रह अत्यन्त उपयागी रहेको छ । यी कथाहरुले भाइबहिनीलाई काठमाडौंदेखि मुस्ताङ हुँदै डोटीसम्मको सामाजिक, भौगोलिक परिवेश चिनाउने जमर्को गरेको छ ।
बालसाहित्यले नयाँ ज्ञान र सीप सिकाउँछ । असल चरित्र निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्छ । सत्मार्गतर्फ लैजान्छ । हरेक मानिसको जीवनमा बाल्यकालका भोगाइ र अनुभव अत्यन्तै रोचक हुन्छन् । बालकथाले रमाइलो ढङ्गले बालबालिकालाई धेरैभन्दा धेरै ज्ञानगुनका कुरा सिकाउछ । जुन कुरा हामीले यत्तिकै भनेर सिकाउन सकिरहेका हुँदैनौँ । तर बाकथाका माध्यमले बालबालिकाले ती कुरा प्रभावकारी रुपमा बुझ्न र महसुस गर्न सक्छन् । स्थापित बालसाहित्य लेखक विजय चालिसेलेका कथाहरु अध्ययन गरेपछि उहाँ यसमा अत्यन्त सफल हुनुभएको देखिन्छ । कथामा कतै यसो गर र उसो गर नभनिकन नै उहाँले चरित्रका माध्यमले बालबालिकालाई धेरै कुरा भन्नुभएको छ । धेरै शिक्षा दिनुभएको छ । यही नै असल कथाकारको विशेषता हो । त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण कुरा यस कथामा नेपालका विविध परिवेशका बालबालिकाको जीवन शैली पढ्न पाइन्छ । यो उहाँको बालसाहित्यको सबल पक्ष हो । यसका लागि कथाकारलाई बधाई र धन्यवाद् दिनुपर्छ ।
२०६५ सालमा प्रकाशित यस बालकथा सङ््ग्रहको प्रकाशक विवेक सिर्जनशील प्रकाशन हो । यस कृतिको पृष्ठ संख्या १ सय ७१ र मूल्य रु.१ सय ५० रहेको छ । आवरण रंगीन र भित्री पृष्ठ एक रंगमा छपाई गरिएको छ ।